Tapatapany eran-tany | NewsMada
Frantsa : Vokatry ny tsy fahampian’ny fitaovana ara-pahasalamana hiadiana amin’ny tsimokaretina Coronavirus any Frantsa, nanapa-kevitra ny fitondrana ny hanangana fitaovana goavana 3D. Fitaovana hahafahana manamboatra ireo zavatra rehetra ilaina hiarovana amin’ny fihanak’ity tsimokaretina ity any an-toerana. Fitaovana miisa 6 no efa tafapetraka izay vatsian’ny orinasa goavana vola ny fampihodinana azy.
Palestine : Niitatra ho roa volana ny fahamehana ara-pahasalamana any Palestine, araka ny fanapahan-kevitry ny mpitondra. 216 ankehitriny ny marary ka antony nanitarana io fe-potoana io. Manao ezaka ihany koa ny fitondrana amin’ny famokarana ny arovava fiarovana, ka ny Cordonier an’ny Hébron no handray an-tanana izany, izay efa nahavita 9 000 isan’andro raha toa ka 500 isa fotsiny no vita tany am-piandohana.
Malawi : Voamarina fa misy olona 4 tratran’ny tsimokaretina Coronavirus ihany koa any Malawi. Nandray fanapahan-kevitra avy hatrany ny fitondrana any an-toerana manoloana izany. Voalohany, nanaiky ny hampidina ny karamany ny filoham-pirenena, Peter Mutharika. Nataony izany ho fandraisana anjara amin’ny ady atao amin’ny Coronavirus. Etsy ankilany, nangataka ny mpikambana rehetra ao amin’ny governemanta izy, hampidina ihany koa ny karaman’izy ireo hatramin’ny 10 isan-jato.
Italia : Nahatsapa ny fitondram-panjakana any Italia, fa tsy araka ny fanangonana ireo legioma sy voankazo any an-toerana, izay tena ilaina tokoa amin’izao ady amin’ny tsimokaretina Coronavirus izao. Manoloana izany, nanapa-kevitra ny mpitondra, ny hananganana ny “couloir vert”, natao indrindra mba hahafahana manangona haingana ny legioma sy ny voankazo any Italia. Tsiahivina, somary nahitana fidinana kely ny antontan’isan’ny mararin’ny Covid-19 tato ho ato, any Italia.